Na-ewu ewu ihe mmetụta okpomọkụ - Akụkọ - Dongguan Jianxing Outdoor Products Co., Ltd.
Onye na-ebugharị okpomọkụ na-ezo aka na ihe mmetụta nke nwere ike ịchọpụta ọnọdụ okpomọkụ ma gbanwee ya na akara ngosipụta eji arụ ọrụ. Okpomọkụ mmetụta bụ isi akụkụ nke okpomọkụ e ji atụ ngwá, na e nwere ọtụtụ iche. Dịka usoro mmesiri, enwere ike kee ya ụzọ abụọ: ụdị kọntaktị na ụdị ndị na-abụghị kọntaktị. Dịka njirimara nke ihe mmetụta sensọ na akụrụngwa eletriki, enwere ike kee ya ụzọ abụọ: nguzogide ọkụ na thermocouple.
Nhazi ọkwa nke isi
Akụkụ nchọpụta nke ihe mmetụta okpomọkụ nke kọntaktị nwere ezigbo kọntaktị na ihe atụ, nke a makwaara dị ka temometa.
The temometa na-enweta njigide ọkụ site na nkwekọrịta ma ọ bụ ntụgharị, nke mere na uru nke temometa nwere ike igosipụta ọnọdụ okpomọkụ nke ihe atụ. N'ozuzu, oke ihe dị elu. N’ime otu ụfọdụ ọ̀tụ̀tụ̀ okpomọkụ, temometa nwekwara ike tụọ nkesa okpomọkụ dị n’ihe ahụ. Mana maka ebugharị ihe, obere ebumnuche ma ọ bụ ihe nwere obere ike ọkụ, njehie mmụba ka ukwuu ga-eme. Igwe mmiri a na-ejikarị na therimometers bimetallic, thermometers mmiri mmiri, nrụgide nrụgide, thermometers na-eguzogide, thermistors, na thermocouples. A na-eji ha eme ihe na mpaghara dịka ụlọ ọrụ, ọrụ ugbo, na azụmahịa. Ndị mmadụ na-ejikarị temometa ndị a eme ihe kwa ụbọchị. Site n'iji ngwa ngwa nke teknụzụ cryogenic dị na injinia nchekwa obodo, teknụzụ oghere, metallurgy, elekrọnik, nri, ọgwụ, petrochemical na ngalaba ndị ọzọ yana nyocha nke teknụzụ na-arụ ọrụ, a na-emepụta thermometers cryogenic nke na-atụ okpomọkụ n'okpuru 120K, dị ka cryogenic gas temometa, uzuoku nrụgide temometa, temometa acoustic, paramagnetic nnu temometa, temomita temometa, ala okpomọkụ thermal eguzogide na ala okpomọkụ thermocouple, wdg Low okpomọkụ temometa chọrọ obere nha, oke ziri ezi, ezi reproducibility na nkwụsi ike. The carburized iko thermal eguzogide mere nke porous elu silica iko carburized na sintered bụ ụdị okpomọkụ N'ịchọpụta mmewere nke ala okpomọkụ temometa, nke nwere ike iji tụọ okpomọkụ na nso nke 1.6 ka 300K.
Ihe ndị dị na ya na-emetụ n'ahụ adịghị emetụ ibe ha aka na ihe a tụrụ atụ, a na-akpọkwa ya ihe eji atụ ọnọdụ okpomọkụ na-enweghị kọntaktị. Enwere ike iji ụdị ụdị a iji tụọ okpomọkụ dị n'elu nke ihe na-agagharị, obere ebumnuche na ihe nwere ikike ọkụ dị ntakịrị ma ọ bụ mgbanwe ọkụ ọkụ ọsọ ọsọ (na-agafe agafe), ma nwekwara ike iji tụọ nkesa okpomọkụ nke ubi okpomọkụ.
Ngwunye a na-ejikarị emetụ ihe na-eme ka a ghara ịdaba na-adabere na iwu bụ isi nke radieshon ojii ma kpọọ ya radieshon okpomọkụ. Igwe okpomọkụ radieshon gụnyere usoro ihe ọkụ (lee pyrometer optical), radieshon (lee radieshon pyrometer) na ụcha ịchọ mma (lee temimeta agba agba). Kindsdị usoro mmụba nke okpomọkụ niile nwere ike ịlele ogo ọkụ ọkụ dị na ya, okpomọkụ radieshon ma ọ bụ ọnọdụ okpomọkụ. Naanị ọnọdụ okpomọkụ a tụrụ maka ahụ ojii (ihe na-amịkọrọ ụzarị ọkụ niile ma anaghị egosipụta ìhè) bụ ezigbo okpomọkụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịchọpụta ezigbo ọnọdụ nke ihe, ị ga-aghazigharị ịdị adị nke ihe ahụ. Ebumnuche dị elu nke ihe abụghị naanị na-adabere na ọnọdụ okpomọkụ na nrugharị, kamakwa na steeti elu, ihe nkiri mkpuchi na microstructure, ya mere o siri ike ịlele n'ụzọ ziri ezi. Na imepụta akpaaka, ọ na-adịkarị mkpa iji mmụba okpomọkụ na-acha ọkụ iji tụọ ma ọ bụ na-achịkwa ọnọdụ dị elu nke ụfọdụ ihe, dị ka nchara ígwè na-agagharị agagharị, ọnọdụ mpịakọta, na-agbapụta okpomọkụ na ọnọdụ dị iche iche nke ọla dị iche iche na-agbaze ọkụ ma ọ bụ na-akpọkpo ọkụ na ígwè. N'okpuru ọnọdụ ndị a akọwapụtara, etu ihe si dị ma sie ezigbo ike. Maka akụrụngwa na njikwa akpaka nke ihu igwe siri ike, enwere ike iji enyo ọzọ wee mepụta oghere ahụ ojii yana elu atụ. Mmetụta nke radieshon ndị ọzọ nwere ike ime ka radieshon dị irè na ọnụọgụ nsị dị irè nke elu atụ. Jiri ọnụọgụ nsị dị irè iji dozie okpomọkụ a tụrụ site na mita ahụ, na n'ikpeazụ nweta ezigbo okpomọkụ nke elu a tụrụ. Igwe kachasị ahụkarị bụ enyo mara mma. Agbasa ike ụzarị ọkụ nke akụkụ a tụrụ atụ dị n'akụkụ etiti nke okirikiri ahụ gosipụtara site na enyo nke hemispherical iji mepụta radieshon ọzọ, si otú a na-abawanye ọnụọgụ nsị dị mma, ebe Îµ bụ ebumpụta ụwa nke ihe, na Ï bụ ngosipụta nke enyo ahụ. Maka mmụba radieshon nke ezigbo okpomọkụ nke gas na mmiri mgbasa ozi, a ga-eji usoro ịtinye tube ihe na-eguzogide okpomọkụ na omimi dị omimi iji mepụta oghere ojii. A na-agbakọ ọnụọgụ ọnụọgụ nke oghere cylindrical mgbe ọ rụsịrị nhazi nke ọkụ na ọkara site na ngụkọta oge. Na nhazi na njikwa na-akpaghị aka, enwere ike iji uru a dozie oghere dị ala (nke ahụ bụ, ọnọdụ okpomọkụ nke ọkara) iji nweta ezigbo ọnọdụ nke ọkara ahụ.
Uru nke mmetụ okpomọkụ na-abụghị kọntaktị: Akara oke mmachi abụghị nke a na-ejedebe site na nguzogide okpomọkụ nke ihe mmetụta okpomọkụ na-arụ, yabụ enweghị oke oke ọnọdụ okpomọkụ kachasị atụ na ụkpụrụ. Maka okpomọkụ dị elu karịa 1800 Celsius C, a na-ejikarị usoro mmụba okpomọkụ na-enweghị ịkpọtụrụ. Site na mmepe nke teknụzụ infrared, mmụba nke okpomọkụ na-eji nwayọọ nwayọọ agbasawanye site na ìhè a na-ahụ anya na infrared. A nabatala ya site n'okpuru 700 Celsius C na ime ụlọ okpomọkụ, na mkpebi ahụ dị oke elu.
Ebe nbugharị nke mita mita na ihe ngwọta maka nsogbu nkịtị nke mita okpomọkụ